Mareykanka oo 24 sano kadib Safiir Cusub usoo magacaway Soomaaliya+Taariiqda Safiirka Cusub | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Mareykanka oo 24 sano kadib Safiir Cusub usoo magacaway Soomaaliya+Taariiqda Safiirka Cusub
“Magcaabistan taariikhiga ahi waxay muujinaysaa xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Somalia iyo Maraykanka, waxayna noo ogolaanaysaa inaanu ka marag kacno horumarka ay samaynayaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo baxaya sannado badan oo ay halkaasi ka jireen colaado” Ayey tiri Jen Psaki.
Jen Psaki waxay sheegtay in Dowladda Soomaaliya looga baahan yahay fulinta shaqooyin badan oo horyaala si ay u gaarto Soomaaliya dal u dhamaystiran dhinacyada dowlada, Wuxuuna sheegay in ay sii xoojinayaan taageerada ay siiyaan.
“Soomaaliya waxaa hortaalla shaqo badan oo ay tahay inay dhamaystirto si ay uga baxdo xaaladda kala guurka isla markaana ugu hayaanto qaran ku naaloonaya barwaaqo, nabad iyo dimoqraadiyad, Dalka Maraykanka waxaa ka go’an inuu ku taageero isla markaana ku garab galo Soomaaliya safarkoodaas sida saaxiibo isu samra oo kale” ayey tiri Spaki.
Hadaba Waa Tuma Katherine Simonds Dhanani:
Katherine Simonds Dhanani, waxaa ay qeyb ka tahay shaqaalaha Wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka, Kooxda la taliyaasha, xiligan waxaa ay agaasime ka tahay Xafiiska Arimaha nabadgalyada ee wasaaradda arimaha dibadda qeybteeda Afrika, xilkaas oo ay heysay laga soo bilaabo 2013-ka.
2007-2010: Dhanani waxaay ay safaaradda Mareykanka ee Harare, Zimbabwe ka ahayd ku xigeenka Madaxa Howl-galada.
Katherine Simonds Dhanani waxaa ay Jaamacadda heerka koobaad B.A ku qaadatay Jaamacadda Kenyon College halka ay Jaamacadda heerka labaad M.A ka diyaarisay Massachusetts Institute of Technology.